Chelsea Oo Ku Biirtay Liiska Kooxaha Doonaya Kabtanka Barcelona Ee Lionel Messi - Gool24.Net
Chelsea Oo Ku Biirtay Liiska Kooxaha Doonaya Kabtanka Barcelona Ee Lionel Messi
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ku biirtay liiska kooxaha doonaya xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi oo go’aan ku gaadhay inuu iska tago kooxdiisa Barcelona.
Sida uu bartiisa Twitterka ku qoray halyeygii Manchester United ee Rio Ferdinand, waxa uu helay xog muujinaysa in tababaraha Chelsea ee Frank Lamaprd uu go’aansaday inuu u dhaqaaqo kabtanka Barcelona ee Lionel Messi, isla markaana uu ka shaqeeyo sidii uu laacibkani uga mid noqon lahaa xiddigaha uu xagaagan lasoo saxeexanayo.
Chelsea ayaa hore ula soo wareegtay labada ciyaartoy ee Timo Werner iyo Hakim Ziyech, waxaanay qarka u saaran tahay Kai Havertz, Thiago Silva iyo Ben Chilwell, kuwaas oo qaarkood la filayo inay Khamiista tijaabada caafimaadka u maraan Blues.
Frank Lampard oo xili ciyaareedkan xili ciyaareedkii hore aanay u suurtogelin inuu ciyaartooyo soo iibsado maadaama suuqu ka xayirnaa waxa uu wali ku hawlan yahay in lacagtii u baaqatay sannadkii hore ay hadda kaga adeegtaan suuqa iibka xilli dhaqaalahana uu saamayn ku yeeshay oo awooddii wax iibsiga ee kooxuhu hoos u dhacday.
Marka laga yimaaddo saddexda ciyaartoy ee ay kaabiga u saaran yihiin heshiiskiisa iyo labada ay dhamaystireen, Chelsea waxa kale oo ay heshay fursad ay kula soo wareegi karto mucjisada kubadda cagta adduunka ee Lionel Messi oo lix jeer kusoo guuleystay abaal-marinta xiddiga dunida ee Ballon d’Or.
Inkasta oo Chelsea aanay ku jirin kooxaha safka hore kaga jira saadaasha kooxaha ay suurtogalka tahay inuu Lionel Messi ku biiro, haddana Rio Ferdinand ayaa xalay sheegay inuu maqlay in Chelsea ay doonayso laacibkan, isaga oo bartiisa Twitterka kusoo qoray: “Hadda ayaan maqlay in Frank Lampard uu doonayo #Messi.”